ဘယျသောအခါမှ မမလြေ့ော့သငျ့တဲ့လူပုံရိုကျကူးနညျး လမျးညှနျခကျြ ၁၄ ခကျြ – Digital Photography Myanmar
Choose ယူနီကုတျ or ဇော်ဂျီ-ဝမ်း here:
Unicode Version | Zawgyi-One Version
HomeBasic Photographyဘယ်သောအခါမှ မမေ့လျော့သင့်တဲ့လူပုံရိုက်ကူးနည်း လမ်းညွှန်ချက် ၁၄ ချက်
ဘယ်သောအခါမှ မမေ့လျော့သင့်တဲ့လူပုံရိုက်ကူးနည်း လမ်းညွှန်ချက် ၁၄ ချက်
November 10, 2016 Jedi Basic Photography 3
Portrait ဓာတ်ပုံပညာသို့မဟုတ် လူပုံအလှရိုက်ကူးခြင်း ဓာတ်ပုံပညာလမ်းညွှန်ချက်တွေဟာ ရိုးရှင်းတဲ့ သာမန် အချက်ကလေးတွေကနေ မလွယ်ကူတဲ့အလုပ်မျိုးဖြစ်တဲ့ ကလေးငယ်တွေကို ငြိမ်အောင်နေခိုင်းတာမျိုးအထိ ကျယ်ပြန့်ပါတယ်။
ဓာတ်ပုံဆရာအများစုက သူတို့ရဲ့မိသားစုတွေ မိတ်ဆွေတွေရဲ့ ပုံရိပ်တွေကို ရိုက်ကူးဖို့ DSLR တွေကို အဆင့်မြှင့်တင်ကြပေမယ့် လူပုံရိုက်ကူးရာမှာ ပုံကောင်းတွေရဖို့ဆိုတာ စိတ်ခေါ်မှုတစ်ခုအဖြစ် အမြဲတမ်းရှိနေပါတယ်။
အပျော်တမ်း နဲ့ ကြေးစား ဓာတ်ပုံဆရာတွေရဲ့ လူအလှပုံတွေအကြားမှာ ကြီးမားတဲ့ ကွာခြားမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ ထို့အတွက်ကြောင့် ဘယ်ဓာတ်ပုံဆရာမဆိုသိထားသင့်တဲ့ လူပုံဓာတ်ပုံရိုက်ကူးရာမှာ အလွန်အရေးကြီးတဲ့ အချက်ပေါင်း ၁၄ ချက်ကိုစုစည်းပြီး ဒီဆောင်းပါးမှာ ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ ဒီဆောင်းပါးမှာ အခြေခံအကျဆုံဲးဖြစ်တဲ့ အပါချာ၊ ရှပ်တာနဲ့ မှန်ဘီလူးရွေးချယ်မှုက စတင်မှာဖြစ်ပြီး ဖိုးကပ်စ်ယူခြင်းနဲ့ ဓာတ်ပုံဖွဲ့စည်းပုံအနေအထားတွေအကြောင်းကို တင်ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ သဘာဝအလင်းရောင်နဲ့ ရောင်ပြန်ပြားတွေကို အသုံးပြုပြီး ပိုကောင်းတဲ့ လူပုံတွေဘယ်လိုဖန်တီးမလဲဆိုတာ တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ပြီးတော့ အဆင့်မြင့် လူပုံရိုက်ကူးခြင်းနည်းစနစ်တွေဖြစ်တဲ့ flash gun တွေနဲ့ အခြားဆက်စပ်ပစ္စည်းတွေကို လူပုံရိုက်ကူးတဲ့အခါ ဘယ်လိုအသုံးပြုရလဲဆိုတာကိုပါ တင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။
သင့်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကို ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးပေးရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ် အခကြေးငွေရယူပြီး ဖောက်သည်တွေကို ရိုက်ကူးပေးရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ စတူဒီယိုအခန်းကျဉ်းထဲမှာရိုက်ကူးတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ပန်းခြံထဲမှာ ရိုက်ကူးတာပဲဖြစ်ဖြစ် အောက်ဖော်ပြပါလမ်းညွှန်ချက်တွေက ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ လူပုံအလှဓာတ်ပုံတွေရအောင် ကူညီပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
ဒီဆောင်းပါးမှာပါဝင်တဲ့ လမ်းညွှန်ချက်တွကို ခေါင်းစဉ် ၃ ခုအောက်မှာခွဲခြားထားပါတယ်
အမှတ်စဉ် ၁ ကနေ ၅ အထိကို အခြေခံ
အမှတ်စဉ် ၆ ကနေ ၁၀ အထိကို Focusing နဲ့ Framing
အမှတ်စဉ် ၁၁ ကနေ ၁၄ အထိကို Flash အသုံးပြုခြင်း
၁။ Exposure Compensation ကိုဘယ်အချိန်မှာအသုံးပြုမလဲ?
သင့်ကင်မရာရဲ့ Metering စနစ်တွေဟာ ဓာတ်ပုံတစ်ပုံရိုက်ကူးရာမှာ အရေးပါတဲ့ အခန်းကနေ ပါဝင်ပါတယ်။ မှန်ကန်တဲ့ အလင်းအမှောင်ရရှိဖို့အတွက် ကင်မရာထဲကို အလင်းရောင်ဝင်ရောက်တဲ့ ပမာဏပေါ်မူတည်ပြီး metering ကအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ အလွန်ပါးနပ်တဲ့စနစ်တစ်ခုဖြစ်ပေမယ့် နေရာတိုင်းမှာတော့ ပြီးပြည့်စုံခြင်းမရှိပါဘူး။ ပြဿနာကတော့ ဒီစနစ်က အလင်းအမှောင်ကို ဓာတ်ပုံရဲ့ frame တစ်ခုလုံးသို့မဟုတ် frame ရဲ့ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပဲဖြစ်ဖြစ် ဘယ်metering စနစ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် အပေါ်ယံ ခြုံငုံပြီး တွက်ချက်တာပါပဲ။
မကြာခဏဆိုသလိုပါပဲ ဒီယူဆတွက်ချက်မှုက မှန်ပေမယ့် အလင်းရောင်တစ်ဝက် အမှောင်တဝက်အနေအထားတွေမှာတော့ မှန်ကန်အောင် တွက်ချက်ဖို့ ရုံးကန်နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။
လူပုံအလှတွေရိုက်ကူးရာမှာ ဖြူဝင်းတဲ့အသားရောင်တွေက ဓာတ်ပုံတွေကို အလင်းရောင်နည်းသွားအောင် လှည့်ဖျားတတ်ပါတယ်။ ဒီအဖြစ်အပျက်ကို မင်္ဂလာဆောင်မှာ သူတို့သမီးဝတ်ရုံကို ရိုက်ကူးတဲ့နေရာ သို့မဟုတ် သူတို့သမီးရဲ့မျက်နှာအပြည့်ကို ရိုက်ကူးတဲ့နေရာမှာ သိသိသာသာ သတိထားမိပါလိမ့်မယ်။
ဓာတ်ပုံထဲကမော်ဒယ်က ကင်မရာရဲ့ မျှမျှတတ အလင်းရောင်ဖတ်ယူမှုကြောင့် မှောင်နေတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
ကင်မရာရဲ့ Exposure Compensation စနစ်တွေကို ပြန်ချိန်ခြင်းဖြင့် ဒီကိစ္စကို ဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်။ ကင်မရာမှာ Positive Exposure +1 ကိုလှည့်ပေးလိုက်ခြင်းဖြင့် မော်ဒယ်ရဲ့ မျက်နှာကို လင်းလာစေပါလိမ့်မယ်။ ရိုက်ကူးပြီးတာနဲ့ ပြန်ကြည့်ပါ သင်ကျေနပ်လောက်တဲ့ အလင်းရောင်မရရင် +2 သို့မဟုတ် +3 စသဖြင့် တိုးပြီး ရိုက်ကူးပါ။
Exposure ကို +2 သို့မဟုတ် +3 တိုးပေးခြင်းအားဖြင့် မျက်နှာလင်းလာမယ်ဆိုပေမယ့် နောက်ခံမြင်ကွင်းမှာတော့ ပိုပြီးလင်းလာနိုင်ပါတယ်။
၂။ အပါချာနဲ့ပက်သက်ပြီး အကြံပေးချက်
လူပုံတွေရိုက်ကူးတဲ့နေရာမှာ ကျယ်ဝန်းတဲ့ အပါချာ (ဥပမာ f/2.8 ကနေ f/5.6) အတွင်း ထားတာ အကောင်းဆုံးဖြစ်ပြီး DOF(Depth of field) လည်းရရှိမှာဖြစ်သလို သင့်မော်ဒယ်ရဲ့ နောက်ခံ မြင်ကွင်းတွေက လှပစွာ ဝါးနေလို့ မော်ဒယ်က ဓာတ်ပုံထဲမှာ ကြွတက်နေသယောင်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။
အဲဒီ DOF ကို ကောင်းမွန်စွာအသုံးချနိုင်ဖို့ အပါချာ ဦးစားပေးစနစ်နဲ့ရိုက်ကူးပါ။ သင့်ရဲ့ DSLR မှာ အပါချာဦးစားပေး (AV) စနစ်ပါဝင်ပြီး အဲဒီစနစ်က မှန်ကန်တဲ့ အလင်းမှောင်ရအောင် ရှပ်တာအမြန်နှုံးကိုပါ မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ တွက်ချက်ပေးပါတယ်။
မော်ဒယ်ရဲ့မျက်နှာက ကင်မရာဘက်ကို အနည်းငယ်လောက် စောင်းထားမိရင် ကျယ်လွန်းတဲ့ အပါချာကြောင့် မော်ဒယ်ရဲ့မျက်လုံးတွေ ဖိုးကပ်စ် လွတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအတွက် အပါချာကို f/5.6 လောက်ချပြီး ရိုက်ကူးဖို့စဉ်းစားသင့်ပါတယ်။
လူပုံအလှရိုက်ကူးဖို့သီးသန့်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Portrait မှန်ဘီလူးတွေမှာ နောက်ခံကို ဝါးသွားစေဖို့ f/1.4 ကနေ f/2.8 လိုမျိုးပိုပြီး ကျယ်တဲ့ အပါချာစနစ်တွေတောင် တပ်ဆင်ထားကြပါတယ်။
မြန်ဆန်တဲ့မှန်ဘီလူး Portrait lens တွေဟာ လူပုံတွေရိုက်ဖို့အကောင်းဆုံးပါ။ f/2.8 (ဘယ်ဖက်) နဲ့ f/5.6 (ညာဖက်) တို့ကွဲပြားမှုက သိပ်မကြီးမားပေမယ့် ပိုမိုကျယ်ဝန်းတဲ့ အပါချာက နောက်ခံမြင်ကွင်းကို ပိုမိုဝါးသွားအောင် စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်ပါလိမ့်မ
ရှပ်တာအမြန်နှုန်းကို တွက်ချက်တဲ့နေရာမှာ သင့်မှန်ဘီလူးရဲ့ Focal Length(ဆုံတာအရှည်) ဘယ်လောက်လဲဆိုတာ ကိုထည့်သွင်းပြီးစဉ်းစားရမှာဖြစ်ပြီး ထည့်သွင်းမစဉ်းစားမိရင်တော့ ကင်မရာရဲ့လှုပ်ရှားမှု (ပုံရိပ်တွေဝါးကုန်ခြင်း) ဆိုတဲ့ ကိစ္စပေါ်ပေါက်လာပါလိမ့်မယ်။
ယေဘုယျသီအိုရီတစ်ခုအရ သင့်မှန်ဘီလူး ဆုံတာ အရှည်ထက်ပို တဲ့ ရှပ်တာ အမြန်နှုန်းကို ပြင်ဆင်ထားရင် ဒီကိစ္စကို ဖြေရှင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဥပမာ ဆုံတာအလျား 200 mm ရှိတဲ့အနေအထားမှာ ရှပ်တာအမြန်နှုံး 1/250 စက္ကန့် သို့မဟုတ် ဒီထက် မြန်တဲ့ အမြန်နှုန်းကို ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအချက်က သင့်ရဲ့ မြင်ကွင်းကျယ်မှန်ဘီလူး (Wide Angle Lens) မှာ သင့်အနေနဲ့ ရှပ်တာအမြန်နှုန်းကို 1/20 စက္ကန့် နဲ့18 mm မှာထားခဲ့ရင် နှေးကွေးတဲ့ ရှပ်တာ အမြန်နှုန်းကို ရှောင်လွှားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့ subject က လျင်လျင်မြန်မြန်နဲ့ သွားလာနေတဲ့အချိန်ဆိုရင်တော့ ကင်မရာရဲ့ Anti-shake စနစ်ကို အသုံးပြုပါ။ အချို့ကင်မရာတွေမှာ ဒီစနစ်က ပါဝင်ပြီးသားဖြစ်ပြီး၊ အချို့ကင်မရာတွေမှာတော့ မှန်ဘီလူးကစနစ်ကို အသုံးပြုပါတယ်။
မှန်ဘီလူးတိုင်းမှာ ဒီနည်းပညာပါဝင်လိမ့်မယ်လို့မဆိုလိုနိုင်ပေမယ့် သင့်မှန်ဘီလူးမှာရှိခဲ့ရင်တော့ အသုံးပြုလိုက်ပါ။ အနည်းငယ်နှေးတဲ့ ရှပ်တာအမြန်နှုန်းကို ကင်မရာကို လက်နဲ့ကိုင်ထားချိန်မှာ အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပြီး ပိုမိုတိကျပြတ်သားတဲ့ ပုံတွေရနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
၄။ ISO ကိုမြှင့်တင်ပါ
အများစုက ဓာတ်ပုံအရိုက်ခံတဲ့အချိန်မှာ လှုပ်သွားတတ်ကြပါတယ်၊ မျက်တောင်ခတ်တာမျိုးတင်မကပါဘူး မျက်နှာ အမူအယာတွေပါပြောင်းလဲတတ်ကြလို့ ဒီကိစ္စတွေလောက် ဓာတ်ပုံထဲမှာ ရုပ်ဆိုးတာမျိုးမရှိပါဘူး။ ဒီကိစ္စတွေကို ရှောင်လွှားဖို့နည်းလမ်းကတော့ မြန်ဆန်တဲ့ ရှပ်တာအမြန်နှုန်းတစ်ခုကို အသုံးပြုဖို့လိုပါတယ်။
ဒီအချက်က သင့်ကို ကြည်လင်ပြတ်သားတဲ့ ပုံရိပ်တွေရအောင် ကူညီပေးမှာဖြစ်ပြီး သင့်အနေနဲ့ လူပုံတွေကိုရိုက်ကူးရာမှာ မကြာခဏဆိုသလိုကင်မရာကို လက်နဲ့ကိုင်တွယ်ရိုက်ကူးရမှ ထွက်ပေါ်လာမယ့် ကင်မရာလှုပ်ရှားမှုကိုလည်း ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
ISO ကိုတိုးမြှင့်လိုက်ပါက ရှပ်တာရဲ့ အမြန်နှုန်းတိုးလာပါလိမ့်မယ်။
AV mode သို့မဟုတ် အပါချာဦးစားပေးစနစ်မှာတော့ အပါချာကို အကျယ်ဆုံးဖွင့်ထားပြီး ရှပ်တာအမြန်နှုန်းကို တိုးမြှင့်ဖို့အတွက် ISO ကို ၁၀၀ ကနေ ၄၀၀ လောက်အထိ ထားဖို့လိုအပ်ပါမယ။
အလင်းရောင်နည်းပါးတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာ ISO ကို ၁၆၀၀ ကနေ ၃၂၀၀ သို့မဟုတ် ၆၄၀၀ အထိကို မြှင့်တင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အနည်းငယ်မှုန်သွားခြင်းဟာ လက်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုကြောင့် ဖြစ်သွားလို့ ပုံရိပ်ဝါးတွေထက်တော့ အများကြီးအဆင်ပြေပါသေးတယ်။
သင့်ရဲ့ လူပုံတွေအပေါ်မှာ သင်ရွေးချယ်လိုက်တဲ့မှန်ဘီလူးက ကြီးမားတဲ့ သက်ရောက်မှုရှိနေပါတယ်။ အရာအားလုံးကို ဓာတ်ပုံထဲပါစေချင်တဲ့အချိန်မှာ မြင်ကွင်းကျယ်မှန်ဘီလူးက မဖြစ်မနေလိုအပ်ပါတယ်။ subject ကိုအောက်ဖက်ကနေ ပင့်ရိုက်ခြင်းဟာ subject ကို နဂိုရှိတဲ့ အရွယ်အစားထက် ရှည်သယောင် ထင်သွားနိုင်ပါတယ်။ လူတွေရဲ့ အမြင်ကို ပြောင်းလဲပေးနိုင်ပြီး မျက်စိကိုလှည့်စားနိုင်တဲ့ နည်းစနစ်ကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်လည်း သင့်ရဲ့မှန်ဘီလူးနဲ့ subject ကို သိပ်ပြီးနီးကပ်သွားရင်တော့ ပုံထဲက subject က ပုံစံပျက်ယွင်းသွားပါလိမ့်မယ်ဆိုတာ သတိထားမိပါစေ။ ပိုပြီးတော့ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ မြင်ကွင်းကျယ်ဓာတ်ပုံတွေရအောင် ကင်မရာကို ရှု့ထောင့်အမျိုးမျိုးကနေ စောင်းပြီး ရိုက်ကူးကြည့်ပါ။
85 mm သို့မဟုတ် 105 mm ရှိတဲ့ medium telephoto မှန်ဘီလူးတွေအသုံးပြုချိန်မှာတော့ မော်ဒယ်သာလျှင် ဓာတ်ပုံထဲမှာ အဓိက subject အနေနဲ့ ရှိနေပေမယ့် နောက်ခံကတော့ အရေးပါတဲ့အစိတ်အပိုင်းအဖြစ် ဓာတ်ပုံထဲမှာ ပါနေဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။ အထက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ ဓာတ်ပုံထဲကအတိုင်းပါပဲ focus မယူထားတဲ့အရာတွေက အခြားသော စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အရာတွေအဖြစ် တည်ရှိနေပါတယ်။ ထို့အတွက်ကြောင့် နောက်ခံမှာ ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာအမြဲ သတိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
70-200 mm f/2.8 လိုမျိုး tele မှန်ဘီလူးတွေကတော့ လူပုံရိုက်ကူးဖို့ အကောင်းဆုံးမှန်ဘီလူးတွေဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ subject အနီးကို zoom ဆွဲပြီး focus ယူခြင်းအားဖြင့် နောက်ခံကမလိုလားအပ်တဲ့အရာတွေကို လျော့ချပေးနိုင်တဲ့အပြင် subject ကိုလည်း ပိုမိုအသားပေးပြီးသားဖြစ်စေပါတယ်။
၆။ ဖန်တီးမှုအားကောင်းတဲ့ ဓာတ်ပုံဖွဲ့စည်းမှုများ
ဓာတ်ပုံဖွဲ့စည်းမှုတည်ဆောက်ဖို့အတွက် မပျင်းပါနဲ့။ မကြာခဏဆိုသလို ဓာတ်ပုံဆရာအများစုက နောက်ကိုနည်းနည်းဆုတ်ပြီး သူတို့ရဲ့ subject တွေကို ဓာတ်ပုံထဲမှာ အကုန်ဖော်ပြရင်ကောင်းမလား သို့မဟုတ် တဝက်လောက်ပဲ ဖော်ပြသင့်လား စသဖြင့် စဉ်းစားလေ့ရှိကြပါတယ်။
ပိုမိုပြီးဆွဲဆောင်မှုကောင်းတဲ့ ဓာတ်ပုံဖွဲ့စည်းမှုရအောင် zoom ဆွဲကြည့်ပါ။ subject ကို ဓာတ်ပုံရဲ့ ဘေးတစ်ဘက်စီကို ကပ်ပြီး နေရာရွှေ့ကြည့်ပါ၊ subject ရဲ့မျက်နှာမူရာဘက်ကို နေရာလွတ်ချန်ထားခြင်းဟာ ဓာတ်ပုံဂုရုကြီးတွေရဲ့ နည်းစနစ်တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်၊ အပါချာကျယ်တဲ့ မှန်ဘီလူးရဲ့ DOF( Depth of field) စွမ်းဆောင်မှုတွေကိုအသုံးချပြီး စမ်းသပ်ကြည့်ပါ။
သင့်ရဲ့ မော်ဒယ်က မသက်မသာခံစားရတယ်လို့ထင်ရခဲ့ရင် နောက်ဆုံးထွက်လာမယ့် သင့်ဓာတ်ပုံတွေက ကောင်းမွန်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ သင့်မော်ဒယ်နဲ့ ဓာတ်ပုံမရိုက်မီ စကားစမည်ပြောပါ၊ ကော်ဖီတစ်ခွက် သို့မဟုတ် လက်ဖက်ရည်တစ်ခွက်လောက် အတူသောက်ပြီး သင့်ရဲ့ စိတ်ကူးတွေကို ပြောပြကြည့်ပါ။
ဓာတ်ပုံစတင်ရိုက်ကူးပြီဆိုတာနဲ့ စကားမပြောပဲနဲ့ ဓာတ်ပုံချည်းရိုက်နေတာထက် မော်ဒယ်ကို ညွှန်ကြားမှုပြုလုပ်ပါ။ သူတို့ကို ဘယ်လိုပုံစံ ကိုယ်ဟန်ပြစေချင်တဲ့အကြောင်း သင်ဘယ်ပုံစံလိုချင်တဲ့အကြောင်း ပြောပြပါ။ သင်ရိုက်ကူးပြီးတဲ့ ဓာတ်ပုံတွေကို မော်ဒယ်ကို ပြန်လည်ကြည့်ရှုစေတာဟာ သင်တို့အကြားမှာ ယုံကြည်မှုကို တည်ဆောက်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတာ သတိရပါစေ။
သင့်ရဲ့ လူပုံတွေကို လျင်လျင်မြန်မြန် ဈေးသက်သက်သာသာနဲ့ တကယ့် ဆရာကြီးတွေရိုက်ထားတဲ့ ဓာတ်ပုံတွေလို အလင်းရောင်မျိုးလိုချင် ရင်တော့ ရောင်ပြန်ပြားကို အသုံးပြုလိုက်ပါ။ အတွင်းပိုင်း (ပြူတင်းတံခါးအနီးနားမှာ) သို့မဟုတ် ပြင်ပြမှာ ရိုက်ကူးတဲ့အခါ အလင်းရဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်ကနေ အရောင်ပြန်စေခြင်းဖြင့် သင့်ရဲ့ subject မှာ မလိုလားအပ်တဲ့ အရိပ်ကျနေခြင်းမျိုးကို ဖျောက်ပစ်နိုင်ပါတယ်။
ရောင်ပြန်ပြားအများစုမှာ အရောင်နှစ်မျိုးပါတဲ့ မျက်နှာပြင်နှစ်ဖက်သို့မဟုတ် ဖြုတ်တပ်လို့ရတဲ့ မျက်နှာပြင်တွေပါပါတယ်။ ထို့အတွက်မို့လို့ ရွှေရောင် ငွေရောင်နဲ့ အဖြူရောင် မျက်နှာပြင်တွေကို သင့်အနေနဲ့ ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။ အဖြူရောင် ရောင်ပြန်ပြားတွေကို စူးရှတဲ့နေအလင်းရောင်တွေကို လျော့ချဖို့အတွက်လည်း diffuser အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါသေးတယ်။
ရောင်ပြန်ပြားအသုံးမပြုထားချိန်။ ရောင်ပြန်ပြားအသုံးမပြုချိန်မှာ ပြူတင်းပေါက်နဲ့ အဝေးဆုံးမှာရှိတဲ့ မော်ဒယ်ရဲ့ မျက်နှာဘက်ခြမ်းက သိသိသာသာ မှောင်နေတာကို တွေ့နိုင်ပါတယ်။
ရွှေရောင်ဘက်ခြမ်း။ ရွှေရောင်မျက်နှာပြင်က အနည်းငယ်တောက်ပါတဲ့ အဝါရောင်ကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီး သင့်လျော်တဲ့ subject အချို့နဲ့သာ အလုပ်ဖြစ်တာမို့ indoor လိုနေရာမျိုးမှာအသုံးပြုရင် သဘာဝသိပ်မကျတာမျိုး ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
ငွေရောင်မျက်နှာပြင်။ ငွေရောင်မျက်နှာပြင်ဘက်ခြမ်းကြောင့် ပိုမိုပြီး အရောင်ပြန်နိုင်တဲ့အပြင် အဖြူရောင်ထက် ပိုပြီးဖြူတဲ့ အရောင်မျိးဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။
အဖြူရောင်ဘက်ခြမ်း။ အဖြူရောင် ရောင်ပြန်မျက်နှာပြင်ကြောင့် သဘာဝကျတဲ့ အမြင်မျိုးကို ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။
၉။ ကင်မရာရဲ့ ဆုံချက်ကို ရှာဖွေပါ
သင့်အတွက်ငွေကြေးအခက်အခဲရှိတယ်ဆိုရင်တော့ အဖြူရောင် ဘုတ်ပြားကြီးတစ်ခုကို အဖြူရောင် ရောင်ပြန်အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သလို အဲဒီအပေါ်မှာ သတ္ထုအလွှာပြားအုပ်ပြီးတော့ငွေရောင်ရအောင်လည်း ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
အထူးသဖြင့် f/2.8 သို့မဟုတ် ဒီထက်ပိုမြန်တဲ့ အပါချာကိုအသုံးပြုချိန်မှာ DOF ကလျော့နည်းသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် focus မိဖို့ သင့်အနေနဲ့ ရုန်းကန်ရနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ အဲလိုမှမဟုတ်ရင် မော်ဒယ်ရဲ့ နှာခေါင်းနေမှာမှာ focus မိနေပြီး မျက်လုံးတွေမှာ focus လွတ်နေတာမျိုး စဖြင့်ကိစ္စတွေနဲ့ လမ်းဆုံးသွားပါလိမ့်မယ်။
ဓာတ်ပုံဖွဲ့စည်းပုံ ကျဉ်းကျဉ်းနဲ့ ရိုက်ကူးရင် မျက်လုံးတွေကို focus ယူဖို့လိုအပ်ပြီး ဖွဲ့စည်းပုံကြီးကြီးထားရင်တော့ မော်ဒယ်ရဲ့ ဦးခေါင်းကို focus ယူဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ Pinpoint focusing လို့ခေါ်တဲ့ မိမိလိုချင်တဲ့ အပိုင်းကိုသာ focuဖြတ်စေဖို့အတွက် Single Autofocus (AF) ကို ရွေးချယ်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။
Central AF point ကိုအသုံးပြုဖို့အတွက် နည်းစနစ်ကောင်းတစ်ခုကတော့ ရှပ်တာခလုတ်ကို တဝက်သာ ဖိထားပြီး မျက်လုံးသို့မဟုတ် ဦးခေါင်းကို focus မိတဲ့အထိ ချိန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးမှသာ သင့် subject ရဲ့ နေရာအထားအသိုကို ကျနစွာချပြီး ကျန်ရှိတဲ့ ရှပ်တာခလုတ်ရဲ့ တဝက်ကို ဖိလိုက်ခြင်းဟာ AF point တွေနဲ့ ရှုပ်ထွေးနေတဲ့အခြေအနေထက် ပိုမိုမြန်ဆန်တဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ထပ်နည်းလမ်းတစ်ခုကတော့ AF အမှတ်အသားတွေကို frame ရဲ့အပေါ်ထောင့်ဖက်တွေမှာထားပြီးတော့ သင့် subject ရဲ့ မျက်လုံးတွေပေါ်ကို နေရာချကာ ရိုက်ကူးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ နည်းလမ်းနှစ်မျိုးစလုံးက သင့် subject ကို frame ရဲ့ အလည်တည့်တည့်မှာ နေရာချထားခြင်းထက် ဘေးဖက်တစ်ဖက်ဖက်ကို ကပ်လိုက်တာ ဓာတ်ပုံဖွဲ့စည်းမှုအတွက် ဟန်ချက်ညီမျှစေအောင် ကူညီပေးပါတယ်။
သင့်မော်ဒယ်ရဲ့ မတ်တပ်ရပ်ပုံ ကိုယ်ဟန်ပြပုံနဲ့ အကြည့်တွေဟာ သင့်ရဲ့ ဖန်တီးအားထုတ်မှုကို ကြီးမားစွာ အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိတယ်ဆိုတာ သဘောပေါက်ထားရပါလိမ့်မယ်။ အထူးသဖြင့် မျက်နှာအမူအရာကလေး နည်းနည်းပြောင်းသွားတာမျိုး ဥပမာ ပြုံးခြင်း မပြုံးခြင်း စတဲ့ အချက်လေးကတောင် ဓာတ်ပုံရဲ့ ပေးစွမ်းနိုင်တဲ့ ရသကို ပြောင်းလဲစေပါတယ်။
ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးတဲ့အချိန်မှာ မော်ဒယ်ရဲ့ မျက်နှာအမူအရာအမျိုးမျိုး ကိုယ်ဟန်ပြပုံအမျိုးမျိုးကို ခင်ဗျားတတ်နိုင်သလောက်ရိုက်ကူးပြီး အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့ အခါ ကွန်ပြူတာထဲမှာ စိတ်ကြိုက်ပြန်ရွေးပြီး တည်းဖြတ်တဲ့အလေ့အကျင့်ကို ကျင့်သုံးပါ။
ထို့အတူ လူပုံတွေရိုက်ကူးဖို့ ပြင်ဆင်တဲ့အခါ သင့်မော်ဒယ်ရဲ့ မျက်နှာမူရာဘက်က ကင်မရာမရှိတဲဘက်ဖြစ်မှာလား ခေါင်းမော့နေမှာလား ခေါင်းငုံ့နေမှာလား စတာတွေကို ကြိုတင်စဉ်းစားထားသင့်ပါတယ်။ နမူနာတွေစမ်းကြည့်ပြီး တကယ်ရိုက်ကူးချိန်မှာ အလုပ်ဖြစ်မဖြစ်စောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
၁၁။ နေသာတဲ့နေ့တွေမှာ Flash အသုံးပြုကြည့်ပါ
နေသာနေတဲ့အချိန်မှာ flash ကိုအသုံးပြုတယ်ဆိုတာ ထူးဆန်းတဲ့ပုံပေါက်နေပေမယ့် သင့်အနေနဲ့ အသုံးချသင့်တဲ့ နည်းစနစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
လူပုံရိုက်ကူးတဲ့ ဓာတ်ပုံဆရာတွေအတွက် နေရောင်ဆိုတာ ပြဿနာပေးနိုင်တဲ့ အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်၊ ဥပမာ မျက်နှာပေါ်ကျနေတဲ့ မလိုချင်တဲ့ အရိပ်တွေ၊ အလင်းအမှောင် မညီမျှတာတွေ နဲ့ burn (အလွန်လင်းသွားတာ) တွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
Fill flash ကိုအနည်းငယ်အသုံးပြုလိုက်ရုံနဲ့ပဲ သိသာတဲ့ တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုတွေကို သင့်ရဲ့ လူပုံတွေမှာတွေ့နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ သင့်မော်ဒယ်နဲ့ နောက်ခံမှာရှိတဲ့ အလင်းရောင်ကြောင့် နောက်ခံကလင်းပြီး မော်ဒယ်က တခါတလေမှာမှောင်နေတတ်တာမို့ fill flash အသုံးပြုတဲ့အခါ ပိုမိုပြီး ဘက်ညီတဲ့ အချိုးညီတဲ့ အလင်းအမှောင်ကို ရရှိနိုင်ပါတယ်။
၁၂။ Flashgun တစ်ခုဝယ်ပါ
Speedlight သို့မဟုတ် Speedlite လို့ တခါတရံခေါ်ကြတဲ့ flashgun ဖလက်ရှ် တစ်ခုဟာ သင့်ကင်မရာမှာ မူလတပ်ဆင်ထားတဲ့ ဖလက်ရ်ှထက် ပိုမိုပြီး အစွမ်းထက်ပါတယ်။ ပိုမိုတောက်ပတဲ့ အလင်းရောင်ကြောင့် အပါချာနံပါတ် အသေးတွေအသုံးပြုပြီး DOF ကောင်းကောင်းရအောင် ရိုက်ကူးနိုင်သလို လူတစ်စုကို ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးရာမှာလည်း အလင်းရောင်ဖြည့်ပေးဖို့ အသုံးဝင်ပါတယ်။
Speedlight မှာ သင့်အတွက် ပိုထိန်းချုပ်လို့ရတဲ့ ဆက်တင်တွေအများအပြားရှိပြီး နံရံသို့မဟုတ် မျက်နှာကျက်တွေကို အလင်းပြန်ပြီးအသုံးပြုလို့ရအောင် Speedlight ရဲ့ခေါင်းကို အရပ်မျက်နှာအတော်များများကို လှည့်ပေးနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။
၁၃။ Flashgun ကို သင့်ကင်မရာနဲ့ အဝေးကနေထိမ်းချုပ်ပါ
Flashgun တစ်ခုက ကင်မရာမှာ ဖြုတ်တပ်လို့ရတဲ့အပြင် ကြိုးနှင့်သော်လည်းကောင်း ကြိုးမဲ့သော်လည်းကောင်း ထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်။ ကြိုးမဲ့အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့ ကင်မရာရဲ့ hotshoe လို့ခေါ်တဲ့နေရာမှာ trigger လို့ခေါ်တဲ့ remote control ကိုတပ်ဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကင်မရာထုတ်လုပ်သူအများစုက သူုတို့ကင်မရာတွေရဲ့ built-in flash တွေနဲ့ trigger အများစုကို တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက် စီမံထားကြပါတယ်။
Flash ကို ကင်မရာကနေ အဝေးတစ်နေရာမှာထားပြီး ရိုက်ကူးခြင်းဟာ flash ကထွက်လာတဲ့အလင်းရောင်ကို သင့်အတွက် စိတ်ကြိုက်ထိန်းချုပ်နိုင်စေမှာဖြစ်လို့ တကယ့် ကြေးစားဓာတ်ပုံတွေလို သင့်ရဲ့ဓာတ်ပုံတွေအပေါ်မှာ လူတွေရဲ့အမြင်တွေကို ပြောင်းလဲစေနိုင်ပါတယ်။
Flash ၂လုံးကို ပိုမိုရှုပ်ထွေးတဲ့အလင်းပေးစနစ်တွေအတွက် အတူတွဲဖက်ပြီးအသုံးပြုလို့ရနိုင်ပါတယ်။ Master လို့ခေါ်တဲ့ flash တစ်လုံးကို remote trigger အသုံးပြုပြီးထိန်းချုပ်လို့ရသလို နောက်ထပ် flash တစ်လုံးကိုပါ တစ်ချိန်တည်းထိန်းချုပ်နိုင်ပြီး အဲဒီ flash ကိုတော့ Slave လို့ခေါ်ပါတယ်။
၁၄။ Flash အလင်းရောင်ကိုအသုံးပြုပြီး အနုပညာဆန်ပါစေ
Flashgun တစ်လုံး၊ remote trigger တစ်စုံနဲ့ အရွယ်အစားသင့်တင့်လျောက်ပတ်တဲ့ diffuser တို့ကို တပ်ဆင်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ သင့်အတွက် ပိုမိုကောင်းမွန် စမတ်ကျတဲ့ lighting ဆက်တင်ကိုပိုင်ဆိုင်ဖို့ အခွင့်အလမ်းကောင်းတစ်ခုရရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့ subject ပိုမိုရုပ်လုံးကြွစေဖို့အတွက် flash gun အသုံးပြုပြီး နံဘေးကနေ အလင်းရောင်ပေးကြည့်လိုက်ပါ၊ ပြီးတော့ နောက်ခံဘက်က ကောင်းကင်သို့မဟုတ် အခြားအရာတွေကို ပိုပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိစေဖို့အတွက် Exposure Compensation EV ကို နောက်ဖက်ကို -2 လောက်ပြန်ရွှေ့လိုက်ခြင်းအားဖြင့် သင့်ရဲ့ subject နဲ့ အတူ စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းတဲ့ နောက်ခံတစ်ခုပါဝင်တဲ့ လူပုံ ဓာတ်ပုံကောင်းတစ်ခုကို ရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Digital Photography Myanmar ရဲ့ ဒီဆောင်းပါး ကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင် share လုပ်ပြီးထပ်ဝေမျှနိုင်ပါတယ်။ ဆောင်ပါးအသစ်တွေအချိန်နဲ့ တပြေးညီဖတ်ရဖို့ အတွက် Digital Photography Myanmar ရဲ့ Facebook page ကိုလည်း Like/follow လုပ်ပေးပါ။
November 3, 2016 Jedi 0
လူသစ်တန်းလဲမဟုတ် ဆရာကြီးလဲမဟုတ်သေးတဲ့ ဓါတ်ပုံဝါသနာရှင်တွေအတွက် အကြံပြုချက်များ
July 9, 2016 Jedi 2
Start Trails ရိုက်ကြရအောင်
September 12, 2016 Jedi 4
3 Comments on ဘယ်သောအခါမှ မမေ့လျော့သင့်တဲ့လူပုံရိုက်ကူးနည်း လမ်းညွှန်ချက် ၁၄ ချက်
Ko htet November 12, 2016 at 4:05 am
ZawMintun November 17, 2016 at 8:35 am
It is very useful for us.
Htet Htet Kyaw July 19, 2017 at 6:51 pm
ကျ​နော်​တို့လို သင်​တန်းအတွက်​အချိန်​မ​ပေးနိုင်​တဲ့သူ​တွေ အတွက်​ ပိုပြီး​တော့အဆင်​​ပြေပါတယ်​
ပုံကောင်းကောင်းရစေမယ့် Camera Setting များ
May 20, 2016 17
Panning ဓါတ်ပုံတွေကို ဘယ်လိုရိုက်ကြမလဲ
June 21, 2016 10
Camera ကို နားလည်စေဖို့ ၁၀၁ အပိုင်း (၁)
June 19, 2016 5
September 12, 2016 4
Copyright © 2019 | Digital Photography Myanmar